Paositra Malagasy: notombanana ny zava-bita telo volana | NewsMada
Paositra Malagasy: notombanana ny zava-bita telo volana
Natao ny 11 hatramin’ny 13 avrily teo, teny Mantasoa, ny fihaonamben’ny mpiasan’ny Paositra Malagasy. Teny an-toerana avokoa ny mpikambana ao anatin’ny filankevi-pitantanana, ny foibem-pitantanana ary ny tompon’andraikitra ambony isan-tsokajiny.
Tanjona ny fanamafisana ny firaisankinan’ny mpiara-miasa, indrindra ny hisian’ny fiaraha-mientana amin’ny fomba fiasa. Fotoana nanaovana tombana ny teo aloha sy ny hijerena miaraka ny tanjona amin’ny ho avy. Tafiditra ao anatin’izany ny tomban’ezaka vita tao anatin’izay telo volana ho an’ny taom-piasana 2019 izay. Noresahina ny hanohizana ny asa, ny zava-bita tsara, ny hanarenana ny lesoka sy ny olana na ny sakana, hanatsarana bebe kokoa ny ho avy, hanatrarana ny tanjona tian-kotratrarina.
Fankasitrahana ny tolotrasa
Notsorin’ny tale jeneralin’ny Paositra Malagasy, Ranarison Richard, fa « tratra ny tanjona napetraka tao anatin’izay telo volana izay, niarahan’ny rehetra niisalahy nahazoana vokatra azo tsapain-tanana ka niantraika tany amin’ny fampandrosoana ny firenena ».
Nanatrika ny famaranana ity fotoana ity ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny niomerika, Rakotonjanahary Ranesa Firiana. Nampisehoana ny rehetra tamin’io fotoana io koa ny amboara Customer Care Award 2018, azon’ny Paositra Malagasy, ny 28 marsa 2019 teo tany Berne Soisa, fankasitrahana vokatry ny kalitaon’ny tolotrasa EMS (Express mail service) amin’ny alalan’ny mailaka.